ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည်ကုမ္ပဏီအများစုအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသော့ချက်သောအချက် (KPI) မဟုတ်ပါ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 16, 2008 အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 2, 2021 Douglas Karr
ငါ့ကိုမယုံဘူးလား မှတ်ချက်များမှသင်၏ကုမ္ပဏီမည်မျှငွေရှာသနည်း။ မှတ်ချက်ပေးသူများထံမှသင်၏ကုမ္ပဏီမည်မျှငွေရှာသနည်း။ သင်၏လူမှုမီဒီယာပို့စ်များကိုမှတ်ချက်ပေးသူများထံမှသင်၏ကုမ္ပဏီမည်မျှငွေရှာသနည်း။
မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်ပါဝင်မှုအားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်စေ့စပ်, is စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုအတွက်အနတ္တ။ အတော်များများ ကျွမ်းကျင်သူများက သူတို့ကတစ်နည်းနည်းနဲ့ ဦး ထုပ်ကနေယုန်ဆွဲကဲ့သို့ဝင်ငွေရရှိရန် ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်, ဤ oddball မက်ထရစ် tout လိမ့်မယ်။ Super Bowl စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှထွက်လာသောကုမ္ပဏီများအတွက် sock puppet ကြော်ငြာများကိုကြော်ငြာသူများကဤအတူတူဖြစ်သည်။
စကားပြောဆိုမှုများနှင့်ထင်မြင်ချက်များအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုကိုသက်သေပြသည့်မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်တွင်မဆိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမျှသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါသလား။ ငါတွေ့ခဲ့သည့်ဆိုဒ်များတွင်၊ ထင်မြင်ချက်များကို ၀ ယ်ယူရန်မ ၀ ယ်လိုသူများမှရေးသားခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ သဘောထားကွဲလွဲသူများနှင့်အွန်လိုင်းအာဏာပိုင်များကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားသူများ ၎င်းတို့အားလုံးအနက်မှမည်သည့် ၀ ယ်ယူရမည်ကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
သွယ်ဝိုက်သောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်မှုများမှဖြစ်ပြီး၊ သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အွန်လိုင်းဂုဏ်သတင်းကိုတိုးတက်စေနိုင်သည့်အပြင်နောက်ဆုံးတွင်အခြားစားသုံးသူများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထိုဂုဏ်သတင်းအပေါ် အခြေခံ၍ သင့်ထံမှ ၀ ယ်ယူရန် ဦး တည်သည်။ အဆိုပါချီးမွမ်းမှုများနှင့်အကြံပြုချက်များသည်စင်ကြယ်သောရွှေဖြစ်သော်လည်းဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်လည်းခက်ခဲလေ့ရှိသည်။
မင်းဖြစ်ချင်တာလား စေ့စပ် သင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူ? ဟုတ်ကဲ့! မေးခွန်းမှာ - လူတွေပေါ့ များမှာ စေ့စပ် တကယ်တော့ ဖောက်သည်များလား မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ပါ ၀ င်သောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်၏လေးစားမှုကိုပြရန်မကြိုးစားပါ။ ငါမှတ်ချက်များကိုနှစ်သက်! မှတ်ချက်များသည်အသုံးပြုသူများထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းအရာများဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာများကိုစကားပြောဆိုမှုနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်ဆက်လက်ရှင်သန်စေရန်ကူညီသည်။ ဒါကသွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့်ကျွန်တော့်အတွက်ဝင်ငွေကိုဆိုလိုတာ၊ မှတ်ချက်အရေအတွက်နဲ့နှိပ်ထားသည့်ကြော်ငြာအရေအတွက်ကြားမှာတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုကိုပြနိုင်လို့ပါ။
ဒီတော့ Engagement ဆိုတာဘာလဲ။
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုဆိုသည်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ သရုပ်ပြတောင်းဆိုချက်၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်၊ အဆိုပြုလွှာတစ်ခုတောင်းဆိုရန်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုသည်မှာသင်၏အွန်လိုင်းရောက်ရှိနေမှုမှရရှိသောဝင်ငွေနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သင်၏ဘလော့ဂ်၏ထိရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်သင်မှန်လျှင်တွက်ချက်ရန်လိုအပ်သည် Marketing ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာပါ:
ROMI = (စကားဝိုင်းများ * အခွန်များ) / (စုစုပေါင်းလုပ်အားကုန်ကျစရိတ် + ပလက်ဖောင်း၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်)
ဒါကိုငါတို့ဖယ်ထုတ်ကြရအောင် စေ့စပ်ထားခြင်း hocus-pocus နှင့်အောင်မြင်သောအမှန်တကယ်မက်ထရစ်အကြောင်းစပြောပါ။ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများမှမည်မျှငွေမည်မျှရှာဖွေသည်။
ဒါဟာတကယ်ကိုမခက်ခဲပါဘူး သာဓကတစ်ခုမှာ Dell မှ၎င်းတို့သည်တွစ်တာကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀,၀၀၀ ကျော် ၀ င်ငွေရရှိနိုင်ကြောင်းမကြာသေးမီကအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာတိုင်းတာလဲ ရေတွက်! အကယ်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာများတွင်ပါ ၀ င်ပါကထိုအရာသည်အလွန်ကောင်းသည် ရိုးသားပါ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါ၊ သင်၏အလားအလာများ (များသောအားဖြင့်ရှာဖွေသူများ) နှင့်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပြီးသင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုငွေသားဖြင့်တိုင်းတာပါ။
Tags: blog မှတ်ချက်များမှတ်ချက်များစေ့စပ်ထားခြင်းkpiစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်site မှတ်ချက်များဝက်ဘ်ဆိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
အံ့သြဖွယ်ကြီးမားသော Format Projection နည်းပညာ
19:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 50 တွင်
ကုမ္ပဏီများသည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုင်းတာရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာသူတို့ရဲ့လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများ (Twitter, myspace, Facebook, etc) ကိုလုပ်ဖို့လူတယောက်ငှားရမ်းတဲ့အတွက်သူတို့ဘာကိုတိုင်းတာရမှန်းမသိဘူး။ whiz bang အတိုင်ပင်ခံကလုပ်နေတယ်လို့ပြောရင်အဲဒါမှန်ဖို့လိုတာပေါ့။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်မည်မျှကြီးကျယ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာဘတ်ဂျက်ကိုတိုးမြှင့်ရန်စဉ်းစားသင့်ကြောင်းဆက်ပြောသည်။